प्रतीक ढकाल काठमाडौं, १७ जेठ
नागरिकताका तिलविक्रम नेम्वाङ अर्थात् कलमका वैरागी काइँला अर्थात् हाम्रा मनका प्रिय काँल्दाइलाई मैले पहिलो पटक कहाँ र कसरी भेटेको थिएँ ? सम्झने धेरै प्रयास गरेँ । तर, अहँ, स्मरणशक्तिले पटक्कै साथ दिएन । यतिसम्म मात्र खुल्यो कि यो भेट बहुदलको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा २०३६ सालतिर इलाम वा झापातिरकै कुनै कार्यक्रममा भएको थियो ।
तर, त्यो कार्यक्रम कहाँ भएको थियो ? इलामतिर कि बिर्तामोडतिरै कतै ? वा धुलाबारीमा ? अनि फेरि सम्झिन्छु- मलाई काँल्दाइसँग प्रत्यक्ष भेट गराइदिने पहिलो व्यक्ति को थियो ? चन्द्रमणि पौड्याल कि कृष्ण धरावासी ? स्मृतिको भण्डारमा यति नराम्रोसँग ताल्चा लागेछ कि जति जोडबलले प्रहार गरे पनि खुल्न मानिरहेकै छैन ।
चन्द्रमणिले पनि भेट गराएकै हो र धरावासीले पनि भेट गराएकै हो । तर, कसले पहिले भेट्टाइदिएका थिए ? त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरोसमेत मज्जाले बिर्सिइएछ । अब बिर्सिई नै सकेपछि त कसको के लाग्यो र ? कहाँ जानू मुद्दा हाल्न ?
जे होस्, यसरी नै भेट भएको थियो यी नबुझिने कविता लेख्ने अग्रज कविसँग पहिलो पटक, जसलाई म थप २ कारणले पनि चिन्थेँ । पहिलो कारण थियो- दानेन्द्र । बुद्ध आदर्श हाइस्कुल, बुधबारेमा कक्षा ६ देखि पढ्न सुरु गर्दा मेरो एउटा सहपाठी थियो- दानेन्द्रविक्रम नेम्वाङ । मदनपुरतिरबाट पैदलै धाएर बुधबारे पढ्ने दानेन्द्रको सिंगो खलकलाई नै हामी ‘डबल सुब्बा’को खलक भनेर चिन्थ्यौँ ।
दानेन्द्रलाई ‘डबल सुब्बा’को नाति भनेर सबैले चिन्थे र माया गर्थे । त्यही दानेन्द्रका काका थिए रे बैरागी काइँला भन्ने सुनिन्थ्यो । दोस्रो कारण थियो- इलाम क्याम्पसमा पढ्दा मानविकीतर्फका मेरा एक जना साथी थिए, राजेन्द्र नेम्वाङ । उनकी श्रीमती शकुन्तला नेम्वाङ हाम्रै कक्षाकी गृहविज्ञान विषयतर्फकी सहपाठी थिइन् । यिनै राजेन्द्र परदेशीका ‘दाजुभाइ’ खलक पर्छन् रे बैरागी काइँला भनेको पनि सुनिन्थ्यो ।
जे होस्, दानेन्द्र र राजेन्द्रका जेसुकै परे पनि वा नपरे पनि, ‘डबल सुब्बा’ खलककै भए पनि वा ‘सिंगल सुब्बा’ मात्र भए पनि मैले बैरागी काइँलालाई कविका रूपमा चिनिसकेपछि मात्र हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो र त्यस भेटलाई जीवनको एउटा ठूलो खुसीको क्षणमा गनिएको थियो । कारण- त्यसबेलासम्ममा कवितै लेखेर चिनिइसकेको छु र अब त ठूलै कवि भइसकेको छु भन्ने भ्रममा थिएँ म पनि । र, हामी दुवै बहुदल पक्षका रहेछौँ भन्ने थाहा पाएर पुलकित बनेको थिएँ ।
काँल्दाइको कविता केही पनि बुिझ्दनथेँ म । तर, इलामको साहित्यिक माहोल नै यस्तो बनिसकेको थियो कि बुझ्दिनँ भन्नासाथ इज्जतै पो जाने हो कि जस्तो डर लाग्थ्यो हामी त्यति साना फुच्चेहरूलाई पनि । अहिले बुझ्छु- त्यो सबै त हामीभित्रको अहङ्कार पो रहेछ ! अल्पविद्या भयङ्करी नि ! खुबै जान्ने पल्टिनुपर्ने हामीलाई ! तर, अहिले कुरो बुझ्दै जाँदा त स्वयं काँल्दाइले पनि बुझ्दा रहेनछन् आफ्नै कविता ।
त्यसबेला नबुझ्ने कविता लेख्ने बाढी नै चलेको थियो । मोहन कोइरालाको ‘फर्सीको जरा’ले हो वा ‘तेस्रो आयाम’को सघनताले हो, त्यसबेलाका कविता पटक्कै बुझिँदैनथे । जति नबुझ्ने कविता लेख्यो, उति ठूलो कवि मानिने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था थियो त्यो ।
नबुझिने कविताको चर्चा चलिरहेकै प्रसङ्गमा एक दिन त अनिवार्य नेपाली पढाउने गुरु बुद्धिप्रसाद घिमिरेले कक्षामा एउटा रमाइलो कुरो नै सुनाउनुभएको थियो, जो अझै पनि मेरो सम्झनामा ताजै छ । ईश्वरवल्लभको कवितासङ्ग्रह ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ प्रकाशन भएपछि त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै पारिजातले एक वाक्य मात्र भन्नुभएकोे थियो रे- ‘यी ईश्वरवल्लभका कविता हुन्, यी ईश्वरवल्लभका कविता होइनन् ।’
सत्य के हो ? हामी फुच्चा कसैलाई पनि थाहै हुँदैनथ्यो तर पनि खुब रमाइलोचाहिँ लाग्थ्यो अनि दिनदिनै नबुझिने कविता लेख्ने र सुनाउने होडबाजीमै हुन्थ्यौँ हामी । सहपाठी लेखनाथ भट्टराई ‘शर्मा देहोती’को नाउँबाट यस्तै आकाश- पाताल जोडेर कविता लेख्थ्यो र हामीलाई सुनाइरहन्थ्यो । हामी पनि दंग परेर सुन्थ्यौँ किनकि यो सबै नै हामीले बुझेको तेस्रो आयाम थियो ।
हामीले तेस्रो आयामलाई यति अनपेक्षित रूपमा बुझ्यौँ कि त्यति त स्वयं ईन्द्रबहादुर राईले पनि बुझेका थिएनन् होला । तेस्रो आयाम भन्नु नै पूर्ण उन्मुक्ति थियो हाम्रालागि । हामी सबै नै ‘मातेको मान्छेको भाषण’ भयौँ, ‘मध्यरातको सडकसँग’ करायौँ र आफूले जेजे जानेका थियौँ, त्यसैमा हरायौँ । तर, त्यतिबेला पनि मेरा सपनामा हररात एउटा लिम्बू बिजुवा आइरहन्थ्यो र मलाई पूर्ण तामझामसहित झाँक्री बसेको दृश्य देखाइरहन्थ्यो ।
मैले त्यो कविता पढ्दा ढ्याङ्ग्रोको तालमा घुङरिङ खेलाउँदै जामा- पगरी लगाएर नाचेको एउटा बिजुवालाई देख्थेँ जहिले पनि । तर, धरावासी भन्थ्यो- ‘तैँले कुरो बुझिनस् दाइ, यो त नर्तकीले खुट्टामा बाँधेको घुँघरुको आवाज हो ।’ तर, म भन्थेँ- ‘तैँले कुरो बुझिनस् भाइ, यो त धामीले छातीमा क्रस पारेर भिरेका छार्लाङछुर्लुङ मालाका घण्टीहरूको आवाज हो ।’
वास्तवमा हामी केही बुझ्दैनथ्यौँ किनकि त्यो कवितै त्यस्तै थियो । शीर्षक नै हाम्रो ज्ञानको सीमाबाहिरको थियो- ‘अस्तित्वको दाबीमा सावातको बैला उत्सव ।’ त्यो भनेको के ? हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन । तर, कविताको व्याख्या गर्न हामी नै पाखुरा सुर्केर तम्सिन्थ्यौँ ।
अझ त्यसमा प्रयोग भएका अन्य मिथक/बिम्बहरू जस्तै जन्तर, आर्केष्ट्रा, पेपिरस, डायनासियस, उन्मत्त भैरव, भाइलोसको फिलिप, मृगासन, पुजारिनी, यज्ञकुण्ड, तिगेनजोङना, लक्ष्मणरेखा, राजा चाल्र्स, गेस्टापो, बाँधाफल, क्षीरसागर, अश्वत्थामा, वैतरणी, इडेनको बगैँचा, ग्यास च्याम्बर, भिनस आदिमध्ये केही मात्र हामीसँग परिचित थिए । बाँकी सबै अपरिचित नै र हाडेओखरभन्दा पनि कडा थिए ।
तापनि सस्वर वाचन गर्दा किनकिन यो कविताबाट एक किसिमको अनौठो ताल र धून उत्पन्न हुन्थ्यो । र, हामी लठुवाहरू त्यसैत्यसै मन्त्रमुग्धझैँ भएर कविता बुझेको भ्रम पाल्थ्यौँ । गाउँमा कोही बिरामी परेर चिन्ता राख्दा जब झाँक्री पूर्ण वक्तृतामा फलाक्न थाल्थ्यो, त्यही बेलाको उत्तेजक दृश्य देख्थेँ म यो कवितामा । म आफूले पनि धेरै पटक ढ्याङ्ग्रो ठटाएर नाच्ने झाँक्रीकै तालमा बडो कुशलतापूर्वक काँसको थाल बजाएर कहिले धामीको ‘खलाँसी’को र कहिले ‘धुपौरे’को भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले म त्यो कवितामा धामी बस्ने बिजुवाभित्र आफ्नै माइला फुपाजु वा छिमेकी तिवारी काकाको छवि देख्थेँ ।
यता, इलामको चोक बजारमा कवि विष्णु नवीनले दिनभरि सारी, चोलो, चुरा, पोते र लिपिस्टिक लगाएर हिँडेको जात्रा देख्थ्यौँ भने उता साँझ- बिहानचाहिँ यही कविताको बिजुवा उत्रिन्थ्यो । त्यही बेलामा लेखनाथले समेत जे पायो त्यही ‘अन्तरिक्षका चेपागाँडा’ जस्ता केही नबुझिने कविता लेखेर हामीलाई नै अल्मल्याउँथ्यो । यी सबै कुराले मस्तिष्कमा यसरी उत्तेजक डेरा जमाएछन् कि बाटोमा दिउँसै हिँड्दा पनि हाम्रा खुट्टा भुइँमा छैनन् कि जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो ।
खै किनकिन, त्यसबेलाका ती दृश्यहरू र यो कविताको कस्तो सम्मोहनले हो, हामी आफैँमा अर्धपागल जस्ता बनेका थियौँ । र, ठूलै कवि हुँदै गएको भ्रममा मनभित्र हुर्कंदै गएको यही ‘पागलपन’ नै हामीलाई अत्यन्त प्रिय लाग्न थालेको थियो ।
थोरै लेखेर पनि प्रख्यातिको शिखर टेक्ने गोपालप्रसाद रिमाल र भूपी शेरचन जस्तै भाग्यमानी साहित्यकार हुन्, वैरागी काइँला । एकातिर उनको यो दुरुह ‘जटिलता’ केही नबुझेर पनि हामीलाई प्रिय थियो भने अर्कोतिर ‘सरलता’का जीवन्त मूर्ति पनि उनै थिए हाम्रालागि ।
माया मेरो मफलर भए बाँधी हिँड्थेँ गलामा
कहिलेकाहीँ मन नहुँदा टाँगिदिन्थेँ किलामा
त्यसबेला त यी पंक्तिको खासै कुरो बुझिएको थिएन । आई. ए. स्तरको कुर्कुरे वैँसको बेला थियो र यसको पहिलो पंक्तिले नै बढी छुन्थ्यो । बजार डुल्दा वा कक्षामा रहँदा प्रशस्तै ‘माया’हरू भेटिन्थे र तिनीहरूमध्ये धेरै जनासँग ‘लभ’ पर्लापर्ला जस्तो हुन्थ्यो । कसैको आँखा मनपथ्र्यो, कसैको कपाल, कसैको अनुहार, कसैको स्वर, कसैको पढाइ त कसैको आनीबानी । ती सबै जोडिएर बनेको एउटै परिपूर्ण सिंगो मूर्ति पाइँदैनथ्यो ‘माया’को ।
अनि हाम्रो बिहान, दिउँसो, बेलुका वा कक्षामा हुँदा, बजार डुल्दा, खेल- तमासा हेर्न जाँदा वा अन्य वनभोज, बिहे- बटुलो, जात्रा र मेलापात जता जाँदा पनि कसै न कसैसँग एकोहोरो ‘लभ’ परिसक्थ्यो । कसै कसैसँगको यो ‘लभ’को ‘ह्याङओभर’ २- ३ दिनसम्म पनि रहन्थ्यो भने कसै कसैलाई त भोलिपल्टै बिर्सिसकिन्थ्यो पनि ।
अहिले जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर पो बुझ्दै छु काँल्दाइको दोस्रो पंक्तिको- अर्थ, गरिमा र गहिराइ । केवल २ लाइनमा सिंगो जीवन दर्शन ? छक्क पर्छु । ‘कहिलेकाहीँ मन नहुँदा’मा त संसारै पो अटाएको रहेछ त ! घरभित्रको ‘परालको आगो’देखि लिएर वर्णाश्रमको संन्यास र वानप्रस्थ सबै यसैमा पो रहेछन् ! जिन्दगीको बोझिलोपना, स्वतन्त्रताको सीमा र चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षाहरूको उडान र अवरोधलाई त काँल्दाइले एउटै ‘मफलर’बाट पो प्रस्ट्याएका रहेछन् ।
यही होला स्रष्टाको दृष्टि भनेको । अचेल त म काँल्दाइलाई यी २ पंक्तिमै ‘महाभारत’ जस्तै गह्रुँगो पाउँछु ।
पछि काठमाडौं आइयो । २०४२ सालदेखि त ढुक्कै यतै छु । काँल्दाइसँगको भेटघाट पनि केही बाक्लिएको छ तर देख्छु सधैँ- उही सरलता, उही शालीनता, उही बाक्लो चस्मा अनि उही- ‘हाओ पर्तिक’को प्रेमिल सम्बोधन ।
‘चीनको विचित्र चित्र’को कम्प्युटर टाइप गरिएको पाण्डुलिपि बोकेर सुकेधारा गएँ निवासमै- भूमिका लेखी माग्न । भन्नुभयो- ‘हाओ पर्तिक, ए कत्ति पो घुम्या’ हाओ । त्योमाथिको डोल्पा पढेर त छक्कै पो परेँ हाओ । म नघुमेको मान्छेले कसोरी पो लेख्नु हाओ घुमेको मान्छेको कितापको भूमिका ?’
निकैबेर बसेर यी ऋषितुल्य मान्छेको कुरा सुनेँ र छक्क परेँ । काँल्दाइले मेरा ‘हिमालपारि पुगेपछि’ र ‘सेती पनि काली पनि’ पढिसक्नुभएको होला भन्ने त मैले कल्पनै गरेको रहेनछु । ४ दिनपछि भूमिका लिन जाँदा ‘मनमा लागेको कुरो’ शीर्षकमा आफ्नै हस्ताक्षरमा लेख्नुभएको पाएँ- ‘हिमाच्छादित पर्वत, पर्वतारोहण, हिमाली जाति र तिनको संस्कृतिका बारेमा नियात्रा पुस्तक लेख्ने र मुलुकभित्र सर्वाधिक बिक्री हुने लेखक हुन्- प्रतीक ढकाल । उनी हिमाल र पर्वतका अनन्य मित्र मात्र होइनन्, भक्त र उपासकसमेत हुन् । यही भक्तिका प्रतापले होला यिनका कलममा पाठकलाई लठ्याउने जादू छ । प्रतीकले लेखेका कितापहरू पढ्न थालेपछि छाड्नै सकिँदैन ।’
ममाथि पोखिएको यो मूल्याङ्कनपरक आशीर्वादका लागि कृतकृत्य छु काँल्दाइ । असीम श्रद्धा र नमन अर्पित छ तपाईंप्रति पनि तर तपाईंलाई थाहै छैन काँल्दाइ, मलाई पर्वत र पर्वतीय जातिमाथि यसरी रुचि जगाउन म हुर्केको गाउँको लिम्बू संस्कृति र तपार्इंकै ‘पर्वत’ कविताको पनि योगदान रहेको छ । म अहिले पनि लिम्बू लवजमा बोलेर साथीहरूलाई हँसाउन सक्छु । तिनै लिम्बूनी चेलीहरूका रक्तिम गाला र गहनाले थिचिएको सौन्दर्यले मलाई प्रकृतिप्रेमी बनायो । र, अहिले तपाईंमाथि यो आलेख तयार गरिरहँदा पनि मेरी इलामकी सहपाठी साथी प्रेमकला नेम्वाङको भर्खरै चोला उठेको खबरले आहत बनाएको छ । जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भन्छन् समाजलाई । तर, यो अदृश्य शत्रु कोरोनाले न जन्ती जान दिन्छ, न त अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न मलामी जान नै दिएको छ । शहर लकडाउनमा छ । कसरी जानू र मलामी ?
इलाममा पढ्दाताका भेटिएका प्रिय लुङ्गाहरू र झापाका छिमेकी लिम्बूहरू नै नेपालको सांस्कृतिक विविधता चिहाउने मेरा पहिला झ्यालहरू थिए । तिनै झ्यालबाट मैले नेपालको सांस्कृतिक विशालतालाई हेर्न सिकेँ । मेरो यति सानो मुलुकमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २९ भाषा बोलिन्छन् भन्ने कुरामा गर्व गर्न सिकेँ । र, इलाम क्याम्पसमा २०३५ सालमा जीवनमा पहिलो पल्ट स्टेजमा चढेर नाच्दा पनि झापाको सतार नृत्य प्रस्तुत गरेँ ।
तपाईंलाई थाहै छैन काँल्दाइ, तपाईंकै ‘मातेको मान्छे’ले मलाई निर्भीक भएर बोल्न सिकायो । तपाईंको ‘हाट भर्ने मान्छे’ले मलाई जीवन बुझायो । तपाईंकै ‘पर्वत’ले उठ्नुको दर्शन र ‘सावातको बैला उत्सव’ले मभित्रको अन्तरसङ्गीतलाई झङ्कृत तुल्याइदियो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरो त तपाईंको त्यही एउटा ‘मफलर’ले मलाई अहिले पनि सिसिफस बनाइरहेको छ । अहिले पनि कसैले मलाई गुणवत्ताका हिसाबले नेपालीमा लेखिएको सबैभन्दा बृहत् काव्य कुन हो ? भनेर सोध्यो भने म निःसङ्कोच भन्न सक्छु- ‘काँल्दाइको मफलर ।’ मेरालागि तपाईंको यो मफलर सन्त कवीरको ‘ढाई आखर प्रेम का’जत्तिकै महान् छ । यसमा जजसले विद्यावारिधि गर्नु छ गरून् । मलाई त यसभित्र रहेको दर्शनको झिल्कोले नै काण्ड पुर्‍याइसकेको छ ।
सेवारो, प्रिय काँल्दाइ !
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, ०९:४९:००
केकी अधिकारीलाई ताैलकै चिन्ता !
भन्सालीलाई प्रहरीले सोध्यो : सुशान्तलाई किन चलचित्रबाट निकालेको ?